EYONQULO 5 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYONQULO 5EYONQULO 5
Iimeko zokucanyagushelwa ngamadini
51Xa umntu ebizwe yinkundla ukuba anike ubungqina, aze anganiki nkcazelo ngento ayibonileyo nayivileyo, unetyala.
2Xa umntu echukumise *into engàphathwayo, enjengesilo esifileyo, udyobhekile, unetyala, nokuba akaqondi. Ingasisilwanyana sasendle esingatyiwayo, nokuba yimfuyo engatyiwayo, okanye sisilwanyana esirhubuluzayo.
3Xa umntu echukumise into engàphathwayo ephuma komnye umntu, loo mntu naye udyobhekile, unetyala nokuba akaqondi.
4Xa umntu efumana afunge engacinganga, nokuba ufungela nantoni na, unetyala nokuba akaqondi.
5Mayela nale micimbi, akuba umntu eziqondile ukuba wonile, makasivume isiphoso sakhe, 6aze eze nemazi yegusha nokuba yeyebhokhwe *kuNdikhoyo, enze idini lokungxengxezela ityala lakhe. Umbingeleli wolinikela elo dini ngenxa yeso siphoso.
7Ukuba loo mntu akanako ukunikela ngegusha okanye ibhokhwe, wozisa amahobe amabini kuNdikhoyo, nokuba ngamavukuthu, enze intlawulelo yesono sakhe ngawo. Elinye loba ngumnikelo wokucamagushela isono, elinye libe leledini elitshiswayo.
8Wowasa kumbingeleli. Yena woqala anikele elinye libe ngumnikelo wokucamagushela isono. Wolaphula intamo, angayiqhawuli kambe intloko, 9aze atshize ngenxalenye yegazi lalo apho ecaleni leqonga. Eliseleyo igazi woliphalaza emazantsi eqonga. Lo ngumnikelo wokucamagushela isono. 10Eyesibini intaka woyenza idini elitshiswayo, njengokomyalelo. Wenjenjalo ke umbingeleli ukwenzela umntu idini, aze axolelwe iziphoso.
11Ukuba loo mntu akanako ukunikela nangamahobe amabini, okanye amavukuthu, wozisa ikhilogram yomgubo wengqolowa, enze ngawo umnikelo. Akayi kugalela mafutha omnquma nantlaka yesiqhumiso kuwo, kuba asingomnikelo wakutya lo, koko eli lidini lokucamagushela isono. 12Wowunika umbingeleli, yena athathe kangangesandla, eqondisa ukuba wonke unikelwa kuNdikhoyo, aze ke awutshise apho eqongeni phezu kweminikelo enikelwa kuNikhoyo ngomlilo. Lo ngumnikelo wokucamagushela isono. 13Wokwenjenjalo ke umbingeleli ukwenzela loo mntu idini, aze axolelwe nasiphi na isiphoso esinjengezi sezikhankanyiwe. Umgubo oseleyo woba ngowombingeleli, kanye njengoko kunjalo xa kwenziwa umnikelo wokutya.
Amadini okucamagushela iziphoso
14*UNdikhoyo wanika uMosis le miyalelo: 15Xa umntu one engaqondanga ngokutyeshela iimfanelo zikaNdikhoyo, loo mntu makathathe emhlambini wakhe inkunzi yegusha engenasiphako, okanye eyebhokhwe, eze nayo kuNdikhoyo, ibe yintlawulelo. Ixabiso layo loba ngangomlinganiselo ovunyiweyo wesiliva. 16Makahlawule neliya lokutyeshela iimfanelo zikaNdikhoyo, aze ongeze isinye esihlanwini. Ke yena umbingeleli womenzela idini ngenkunzi leyo ngenxa yesono sakhe, aze asixolelwe eso sono.
17Xa umntu one engaqondanga ngokwaphula nayiphi na imimiselo kaNdikhoyo, loo mntu unetyala, yaye uya kuluthwala olo xanduva. 18Kufuneka eze nenkunzi yegusha engenasiphako kumbingeleli, okanye ibhokhwe. Ixabiso layo loba ngangomlinganiselo ovunyiweyo. Umbingeleli wolinikela idini, aze loo mntu axolelwe isiphoso sakhe. 19Eli lidini lokucamagushela ityala leziphoso zokwaphula ummiselo kaNdikhoyo.